Home Wararka Kenya oo diiday in ay qaabisho wafdigii Farmaajo u dirsaday in ay...
Kenya oo diiday in ay qaabisho wafdigii Farmaajo u dirsaday in ay soo qanciso Kenya
Madaxweynaha uu uu waqtigiisa dhamaaday ayaan wali ka quusan in uu kurisiga isku sii dhajiyo. Isaga oo ku jira isku daygii ugu danbeeyay uu ku deenoyayo in ku nagaado kuriga ama dib loo soo doortay ayaa waxa ayaa waxa uu magalada Naironi ee dalka Kenya uu u diray wafdi kuwaas oo qorshahoodu ahaa in ay dowlada Kenya ku soo qanciyaan in heshiis cusub la gaalan Farmaajo.
Gudiga oo isugu jira qaar laga soo diray magalada Muqdisho oo ay ku jiraan Lataliyihiisa arimaha Siyaasada Cabdi Cali Raage, Wasiiru Dowlada Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha Ashir, waxa isaga magalaada Naiorbi kaga biiray qareenka Soomaali Kenyka ah Axmad Adan (Axmed Dhere).
Farmaajo ayaa doonaya in uu u balan qaado Dowlada Kenya in uu u saxiixi doono wax kastaa oo ay ugu baahato Soomaaliya, hadii ay qayb ka noqdaan qorshaha uu ku doonayo in uu xukunka ku sii nagaado. Taas oo macnaheedu tahay in uu diyaar u yahay in heshii ka galo dacadwada bada iyo arimaha qaadka.
Dowlada Kenya ayaa gabi ahaanba diiday in ay qaabisho kooxda uu Famaajo soo dirsaday. Kooxdaas ayaa ku dhex meeraysanaysa magaalada Nairobi dhexdeeda iyaga oo wado lacag la doonayo in lagu laaluusho sirdoonka iyo wasiirda dalka kenya.